Ukugcina umlando ngobugqila - isisekelo se-afrikhepri
Welcome Izigaba UBUGQILA
Umugqa wobugqila: ongakaze utshelwe kona
UDavid Duke ucaphuna izazi-mlando ezingamaJuda ezifakazela indima evelele yamaJuda ebugqilini eNtshonalanga kusukela okungenani ngesikhathi samaRoma futhi echaza ukuvinjelwa kwabezindaba maqondana ...
U-Abraham Petrovitch Hanibal, noma u-Abram Petrovitch Gannibal owazalwa ngo-1696, ushone ngoMeyi 14, 1781. Unguyisemkhulu ongumama wembongi yaseRussia u-Alexander Pouchkine. Impilo ka-Abraham Hanibal yinoveli eyiqiniso ...
I-Toussaint Louverture kanye ne-Haiti Revolution
UFrançois-Domenica Bréda waziwa njengoToussaint Louverture. Ungomunye wamagama amakhulu wenguquko yaseHaiti futhi owokuqala omnyama ukuba ngumbusi wekoloni. Yena ...
Kwakungubani uFrederick Douglass?
UFrederick Douglass ungomunye wabantu abadume kakhulu e-Afrika naseMelika ngesikhathi sakhe. Usebenzela uhulumeni kazwelonke emisebenzini eyahlukahlukene, ungomunye wezikhulumi nababhali abakhulu be ...
Qaphela isikhumbuzo se-ACTe: umuntu omnyama uhamba ze
Isikhumbuzo se-ACTe, esivula lokhu ngoJulayi 7, 2015 ngemuva kokumenyezelwa nguFrançois Hollande ngoMeyi 10, sibonisa isifiso sokunikeza indawo enikezelwe kwinkumbulo ehlanganayo yobugqila ...
Uzalelwe eJamaica, uDutty Bookman uyisigqila sendawo yokuhlala eTurpin ethafeni elisenyakatho yeSanto Domingo (namuhla eyiHaiti). Ngobusuku bango-Agasti 14, 1791, eBois-Caïman, endaweni ...
Wayengubani uRafael Cordero, ubaba wezemfundo yomphakathi ePuerto Rico?
URafael Cordero obonwa njengobaba wezemfundo yomphakathi ePuerto Rico wayengumuntu ozifundisayo onikeza izingane imfundo yamahhala, kungakhathalekile ukuthi ngabe uluhlanga luni futhi ...
URey Miguel noJosé Leonardo Chirino, izimpawu zokumelana nobugqila eVenezuela
Ukumelana nobugqila eVenezuela kwaqala kakhulu. Ukuqoshwa kokuqala kwenzeka ngo-1532 eCoro kodwa kwavela ukuvukelana okwaziwa kakhulu ...
EGibhithe lasendulo, iziboshwa zazibizwa "skr-cnh" okusho ukuthi "ukuthunjwa"
EGibhithe lasendulo, iziboshwa zazibizwa nge- "skr-cnh" okusho ukuthi "abathunjiwe". Kwakunjalo kuwo wonke ama-kama, isiboshwa sasiyisithunjwa esasinamalungelo ...
Wayengubani uFrancisco Del Rosario Sanchez, ubaba wenkululeko kaSanto Domingo?
UFrancisco del Rosario Sánchez, owazalwa ngoMashi 9, 1817 eSanto Dominguo, wadutshulwa wabulawa ngoJulayi 4, 1861 wayengummeli futhi engusopolitiki wase-Hispaniola, umsunguli osebenzisana naye, ...
Wayengubani uNat Turner, isigqila esahola inguquko e-United States ngo-1831?
UNat Turner, owazalwa ngo-Okthoba 2, 1800 futhi washona ngoNovemba 11, 1831, wayeyisigqila sase-Afrika laseMelika. Ngo-1831, wahola umbhikisho esifundeni saseSouthampton eVirginia ....
Sasiyini isimo sabantu base-Afrika uqobo maqondana nokuhweba ngezigqila?
Isimo sabantu base-Afrika kule ndawo siyisifundo esingafundiswanga kangako kepha esivele senziwe inganekwane kaninginingi. Izigqila kanye nabacwasayo baqamba amanga lapha ...
UMarcos Xiorro, inceku e-1821 ihlela ukuvukela ePuerto Rico
UMarcos Xiorro wayeyisigqila, okwathi ngo-1821 sahlela ukuvukelwa kwezigqila kwabanini bamasimu kashukela nohulumeni wamakoloni waseSpain ePuerto Rico. Ngisho ...